एमाले नेतृत्वमा लुम्बिनीबाट ७ पदाधिकारीसहित ६० जना निर्वाचित (सूचीसहित) – Nepal Press
२०७८ मंसिर १५ गते १६:३३
रुपन्देही । नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा लुम्बिनीका ७ जना निर्वाचित भएका छन् ।
उपाध्यक्षमा विष्णु पौडेल र युवराज ज्ञवाली, महासचिवमा शंकर पोखरेल, उपमहासचिवमा प्रदीप ज्ञवाली र सचिवमा गोकर्ण विष्ट, टोपबहादुर रायमाझी तथा छविलाल विश्वकर्मा निर्वाचित भएका हुन् ।
यसअघि उपमहासचिव रहेका नेता घनश्याम भुसाल उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि पराजित भए । तर, केन्द्रीय सदस्यमा भने निर्वाचित भएका छन् ।
केन्द्रीय अनुशासन आयोगको उपाध्यक्षमा रूपन्देहीका नेत्र पन्थी र केन्द्रीय लेखा आयोगको उपाध्यक्षमा कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी चयन भएका छन् ।
लुम्बिनीबाट ६० जना केन्द्रीय कमिटीमा समेटिएको प्रचार विभागका सदस्य डीआर घिमिरेले बताए ।
एमालेले लुम्बिनी प्रदेशलाई आधार इलाका मान्दै आएकाले पनि पदाधिकारीमा ठाउँ पाएको नेताहरूको विश्लेषण छ ।
नवौं महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा निर्वाचित रुपन्देहीका विष्णु पौडेल अन्तिम समयसम्म महासचिवमा प्रमुख दाबेदार रहेका थिए । तर, अध्यक्ष केपी ओलीकै प्रस्तावमा उनी विष्णु पौडेल उपाध्यक्ष बनेका छन् । उनी दुईपटक अर्थमन्त्री बनेर लोकप्रिय बजेट ल्याएका कारण र नेकपाकालमा महासचिवको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाएका कारण पार्टीभित्र थप बलियो बनेका हुन् ।
समन्वयकारी भूमिकामा अग्रभागमा देखिने पौडेल यसअघि संगठन विभाग प्रमुख रहेकाले पनि आन्तरिक संगठनमा बलियो बनेका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पराकिलो मतान्तरले हराएर चर्चामा आएका पौडेल रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । रूपन्देहीमा पौडेलले अगाडि बढाएको विकासले एमालेको जनआधार बलियो छ ।
उपाध्यक्षमै दाङका युवराज ज्ञवाली निर्वाचित भएका छन् । सरल र सादगी नेताको पहिचान बनाएका ज्ञवाली यसअघि ९ औं महाधिवेशनमा पनि उपाध्यक्षमै विजयी भएका थिए । लामोसमय माधव नेपाल समूहमा रहेका उनी पार्टी विभाजनको बेला एमालेको बलियो खम्बा बनेर मूलधारमै रहेका हुन् ।
पार्टीभित्र अध्यक्षपछिको शक्तिशाली पद मानिने महासचिवमा लुम्बिनी प्रदेशकै दाङबाट शंकर पोखरेल निर्विरोध भएका छन् ।
उनी लुम्बिनी प्रदेशको निर्वतमान मुख्यमन्त्रीसमेत हुन् । केपी ओलीको विश्वासपात्र पोखरेललाई ओलीले महासचिव बन्ने संकेत विधान महाधिवेशनमै गरेको धेरैले आंकलन गरेका थिए । पार्टीभित्र सैद्धान्तिक बहस गर्ने र जबजको व्याख्याताका रुपमा पहिचान बनाएका पोखरेल ९ औं महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा पराजित भएपनि स्थायी कमिटीमा रहेर महत्वपूर्ण काम गरेका थिए ।
वैचारिक नेता मानिने गुल्मीका प्रदीप ज्ञवाली उपमहासचिव बनेका छन् । ज्ञवाली एमाले सचिव थिए । त्यस्तै गुल्मीकै गोकर्ण विष्ट पनि सचिव बनेका छन् । उनी यस अगाडि पनि सचिव नै थिए । गुल्मीमा मात्र नभई लुम्बिनी प्रदेशमै ज्ञवाली र विष्ट लोकप्रिय मानिन्छन् । विष्टले लोकप्रिय मत प्राप्त गरे ।
त्यस्तै रूपन्देहीकै छविलाल विश्वकर्मा सचिवमा निर्वाचित भएका छन् । लामो समयदेखि ओलीलाई साथ दिँदै आएका विश्वकर्मा यसअगाडि स्थायी कमिटी सदस्य थिए । एमालेको पदाधिकारीमा पहिलोपटक दलित समुदायबाट उनले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । सचिवमै अर्घाखाँचीका टोपबहादुर रायमाझी निर्वाचित भए । अर्घाखाँचीमा जनआधार राम्रो बनाएका उनी पूर्वमाओवादी नेता हुन् । विकासप्रेमी नेताको पहिचान बनाएका रायमाझी एमालेमा रहेपछि साविकको लुम्बिनीका धेरै माओवादी नेता-कार्यकर्तालाई एमालेमै राख्न सफल भए ।
माओवादी जनयुद्धका कमाण्डरमध्येका एक रायमाझी शान्ति प्रकृयामा आएपछि कुनै निर्वाचनमा पराजित भएका छैनन् । यसअघि माओवादीले लुम्बिनीका सबै जिल्लाबाट पराजय हुँदा उनीमात्र विजयी भएका थिए ।
केन्द्रीय आयोगको मुख्य पदमा पनि लुम्बिनी छुटेको छैन । अनुशासन आयोगको उपाध्यक्षमा रूपन्देहीका नेत्र पन्थी चयन भएका छन् । उनी यसअघि पार्टीको सल्लाहकार थिए । त्यस्तै केन्द्रीय लेखा आयोगको उपाध्यक्षमा कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी चयन भएका छन् । आयोगका केन्द्रीय सदस्यमा पनि लुम्बिनीबाट धेरै सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन् ।
नेकपा एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्वाचित हुने लुम्बिनीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू :
लुम्बिनी प्रदेश भुगोल
१. लिला गिरी
२. खेममान खड्का
३. दिनेश पन्थी
४. नवीन रोका मगर
५. भुमिश्वर ढकाल
६. हरिप्रसाद रिजाल
१. साबित्रा अर्याल
२. मेनका पोखरेल
३. सरिता खनाल भुसाल
आदिवासी जनजाति खुल्ला
गोकुलप्रसाद घर्ती मगर
तराई मधेश खुल्ला :
पसुपती दयाल मिश्र
दलित समुदाय खुल्ला :
थारु समुदाय खुल्ला :
गङा चौधरी सतगौवा
मुस्लिम समुदाय खुल्ला :
महम्मत हारुन हलुवाई
सिराज अहमद फारुसी
श्रमिक क्षेत्र खुल्ला :
अनुशासन आयोग :
उपाध्यक्ष : (१) नेत्रप्रसाद पन्थी
खुल्ला सदस्य :
लेखा आयोग :
उपाध्यक्ष : (१) बिष्णु पन्थी
महिला सदस्य :
प्रकाशित: २०७८ मंसिर १५ गते १६:३३
One thought on “एमाले नेतृत्वमा लुम्बिनीबाट ७ पदाधिकारीसहित ६० जना निर्वाचित (सूचीसहित)”
केशवराज भट्टराई says:
सबै कमरेडलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु